K Motlanthe: State of the Nation Address (isiXhosa)
INtetho ngoBume beSizwe eka Mongameli woMzantsi Afrika, uKgalema Motlanthe, kwiNdibano Ehlangeneyo yePalamente, eKapa ngowe-6 kweyoMdumba 2009
Somlomo weNdlu yoWiso-mThetho;
Mnu. Sihlalo weBhunga leSizwe lamaPhondo;
Nkosikazi Sekela Mongameli;
Sekela Somlomo kunye noSekela Sihlalo weBhunga leSizwe lamaPhondo;
Jaji eyiNtloko Langa;
Owayesakuba nguSekela Mongameli weRiphabliki yoMzantsi Afrika kunye noMongameli we-ANC; IiNkulumbuso zamaPhondo;
Malungu eKhabhinethi kunye nooSomlomo beziNdlu zoWiso-mThetho zamaPhondo;
Owayesakuba yiJaji eyiNtloko kunye nabo baBesakuba ngamaGosa aChopheleyo ePalamente;
Magosa aphezulu, Oonozakuzaku, abaMeli bamaZwe kunye nezidwesha zamazwe angaphandle ezityeleleyo;
Zinkokheli eziBekekekileyo zamaQela ezoPolitiko naMalungu ePalamente, iiNkokheli zeMveli;
Ohloniphekileyo uSodolophu waseKapa;
Zinkokheli zenkolo kunye nabameli boluntu;
Maqabane kunye nabahlobo;
Lilungelo elilodwa kum elokuthetha kule Ndibano iHlangeneyo yePalamente yeRiphabliki yoMzantsi Afrika, ekuqaleni kwale seshoni yokugqibela yePalamente yethu yeDemokhrasi yesiThathu.
Ndimi phambi kwabantu boMzantsi Afrika ngokuzithoba ngethuba endibe nalo lokuba kweyona ofisi iphakamileyo elizweni oko kube kwenzeke ngenxa yemeko eyodwa evele kwisigqibo seqela elikhokelayo kurhulumente sokurhoxisa owayesakuba nguMongameli. Eyam imfanelo, kwiinyanga ezimbalwa, kukukhokela isiGqeba seSizwe ekugqibezeleni igunya elanikwa i-ANC kunyulo luka-2004, Kunye nasekubekeni isiseko solawulo lwangaphaya konyulo ukuze luqhube kakuhle ulawulo.
Kwiinyanga ezintlanu ezidlulileyo siye saqinisekisa utshintsho olungenamagingxi-gingxi kunye nokuqhuba kwemisebenzi karhulumente sibamba ngazibini ke kwinkqubo yethu yomgaqosiseko evuthiweyo, ekubonakala inxenye yayo kwintsebenziswano yamalungu amatsha kunye namadala kunye noncedo oluzinzileyo lwabaphathi bethu becandelo labucala. Xa sijonga emva kwiminyaka elishumi elinesihlanu edlulileyo, ndinqwenela ukuvuma ukuzibophelela kunye nokusebenza nzima kwaboNgameli Nelson Mandela noThabo Mbeki kunye nabasetyhini kunye namadoda amaninzi adlale indima yawo ekuqhubeni inqanawa karhulumente phantsi kwedemokhrasi: kwisiGqeba nakulawulo, izindlu zowiso-mthetho kumacandelo omathathu karhulumente kunye necandelo leenkundla; ziqhutywa lulangazelelo lokuphucula ubulunga bobomi babo bonke abeMi boMzantsi Afrika.
Ngaphezu kwako konke, ndimi phambi kwenu ngebhongo nokuzithemba kuba uMzantsi Afrika esiwubhiyozela namhlanje lowo ubusakucalula, kukho impixano nokungaqukwa kwabathile kokwenziwayo kwiminyaka nje eli-15 edlulileyo ngoku usisiqhamo semisebenzi nokubila kwabasetyhini kunye namadoda oMzantsi Afrika mbombo zone zomhlaba. Aba bemi boMzantsi Afrika bemele ithemba nokomelela okuluphawu lwesizwe sethu. Phakathi kwabeMi boMzantsi Afrika abaziwayo nabakhethekileyo ngamaLungu ePalamente yethu yedemokhrasi ngelishwa abaye basishiya ku kweyoMdumba ephelileyo. Abo baquka u-Brian Bunting, Billy Nair, Ncumisa Kondlo, John Gomomo, Joe Nhlanhla, Cas Saloojee, John Schippers no-Jan van Eck.
Kwaba bantu ndibakhankanyileyo, ndingathanda ukongeza uNksk Helen Suzman, uMmi woMzantsi Afrika obegqwesile, owamela iinqobo ezisemgangathweni zePalamente yethu entsha kumagumbi amadala weengxoxo. Ngaba bathandi besizwe kunye nabanye ekufuneka banconywe kakhulu xa sibhengeza ukuba nokuba zinokuzisa ntoni na kumanxweme ethu izaqhwithi zoqoqosho, nokuba kungakho ukungaqiniseki kwezopolitiko okungakanani kuthi ngexa lenguqu isizwe sethu sikwimo entle. Koko, kufuneka singayithatheli phantsi imiceli-mngeni esijongene nayo. Ukwehla kwezoqoqosho kumazwe ngamazwe akulubeki ngozini ingako uqoqosho lwethu ekulahlekelweni yimisebenzi kunye nobulunga bobomi babantu bethu. Ngokwendalo, ukungaqiniseki kwinguquko yezopolitiko kungabeka imibuzo emininzi kuneempendulo ezikhoyo ngoko. Njengesiphumo, abanye bethu banokungazilawuli ngokwabo batsalwe ngamaza otshintsho lwemozulu enezaqhwithi baze boyiswe ngamagingxi-gingxi ezoqoqosho kunye nesaqunge sezopolitiko. Kodwa olwethu luhambo lwethemba nokomelela. Sinokude sithi, kwimeko ethile engaqhelekanga, imiba emininzi yomgaqosiseko wethu iye yavavanywa kutsha nje kwixa elidlulileyo, kwaye ngamnye kuyo iye yaluphumelela uvavanyo ukuze iveze idemokhrasi eyomelela kwakhona ngokukhawuleza okukhethekileyo. Idemokhrasi yethu inempilo. Ikhula isomelela ngokuthe chu, isomelezwa nguMgaqo-siseko ongalinganisekiyo elizweni. Ngenene, kukomelela kokuzibandakanya kwethu kwezopolitiko ngeli xesha lokhuphiswano lonyulo elo sonke sivumelanayo ukuba kufuneka libe nesidima noxolo lolona qiniselo luqinisekileyo lokuphila okuqhubayo kunye nokubanzulu kwedemokhrasi yethu.
Ngabantu boMzantsi Afrika abaye baqinisekisa inkqubela yawo, kwaye ngabo abaya kukhusela idemokhrasi yethu kwiminyaka ezayo. Ndivumele, Nkosikazi Somlomo noSihlalo, ngokuphathelene noku ukuba ndibongoze bonke abeMi boMzantsi Afrika abafanelekileyo ukuba babhalise baze bavote kunyulo oluzayo lwesizwe nolwamaphondo, ukuze sizibumbele ngokwethu indawo esifuna ukuba kuyo.
Oku kufuneka sikwenze suku ngalunye kwii-ofisi zikamasipala, phambi kokuba uluhlu lwabavoti luvalwe. Kodwa kwakhona kufuneka siyivuyele impela-veki ekhethekileyo yobhaliso elungiselelwe yiKomishoni yoNyulo yoMzantsi Afrika ngomso nangeCawa, umhla wesi-7 nowesi-8 kweyoMdumba ngokulandelelana.
Mandithathe kwakhona eli thuba ndithi kwiintsuku ezimbalwa ezizayo ndiyakugqibezela ukudibana kwam neKomishoni yoNyulo kunye neeNkulumbuso zamaPhondo ndibhengeze umhla wonyulo.
Ubukho bethu njengedemokhrasi bube ngenxa yabantu baseMzantsi Afrika abo, ngowama-27 kwekaTshazimpunzi 1994, okokuqala ngokuhlangeneyo bathathela ezandleni zabo abakufunayo. Ngeso senzo silula kodwa sinzulu sokufaka ivoti kurhulumente wabo bonke abantu belizwe lethu, siye sashiya emva okudlulileyo okusihluthe ukuba ngabantu kwethu.
Kufanelekile ke ngoko kulo msitho ukuba kubhiyozelwe isikhumbuzo seminyaka engama-20 sokwamkelwa kwe-Declaration of the OAU Ad-hoc Committee kumZantsi we-Afrika leyo eMzantsi Afrika yamkelwa kweyeThupha, 1989 ngokuqhelekileyo eyaziwa ngokuba yi-Harare Declaration. Elo phulo labeka isiseko semvumelwano yezizwe ngezizwe, oko kusenziswa ngeZizwe eziManyeneyo, ngendlela emayisetyenziswe kuthetha-thethwano eMzantsi Afrika. EMzantsi Afrika, yazisa kwakhona okubaluleke kakhulu kwiNkomfa ka-1989 yekaMva leDemokhrasi lihlanganisa kunye amathanda sizwe avela kumagumbi omane omhlaba awohlukahlukeneyo.
Konke oku kwakhokelela kwinkqubo yothetha-thethwano eyakhokelela kunyulo lwethu lokuqala lwedemokhrasi ngo-1994. Ngokuphathelene noku, masothuleleni umnqwazi ongasekhoyo uMongameli we-African National Congress, uOliver Reginald Tambo, ngokuqala nokukhokela oko ekwenza ngamaqurhu amazwe nawezizwe ngezizwe nto leyo eye yaba sisikhokelo sesisombululo esinoxolo kwimpixano ebikwilizwe lethu.
Elo nyathelo lobukhalipha lenza inkqubo-sikhokelo eyayiza kufuna uxolo noxolelwaniso, endaweni yemfazwe nempixano, labuyisela emva isifingo esingeyonyani seminyaka elikhulu eyadlulayo: oko kukuthi, isiphelo ngo-1909 seNgqunguthela yeSizwe esaxela kwangaphambili ukusekwa kweManyano yoMzantsi Afrika. Ngexa iNgqungquthela yachaza ukhuselo lwesidima soMzantsi Afrika njengoko sisazi namhlanje, yayisekelwe kwingcinezelo nokukhutshelwa ngaphandle ngokobuhlanga.
Kwakhona, kwi-15 leminyaka kwidemokhrasi yethu, singabhengeza ukuba uloyiko, ukungakhuseleki kunye nenzondo ezo kwiminyaka eli-100 zenza uxolo olukhethekile nolulahlekisayo phakathi kwabaphathi bezithanga, zange kungafunyaniswa nje kuphela, kodwa ngokwenene kwakubekwe ndaweni yimbi.
Olo loyiko nokungakhuseleki kwaye kwanika ukonyuka kuye kumashumi eminyaka oxhathiso. Ngokuphathelene noku, sothulela umnqwazi elo khalipha lonyana woluntu lwethu, u-Solomon Kalushi Mahlangu owaye waxhonywa kwiminyaka engama-30 eyadlulayo engoyiki ngokoyikiswa, eneqhayiya lokuba igazi lakhe liya kunkcenkceshela umthi wenkululeko. Ndivumeleni ke ndamkele u-Lucas Mahlangu, ubhuti kaKalushi, omele usapho lakwaMahlangu. U-Solomon Mahlangu wayeqhuba isiko lamagorha eminyaka edlulileyo, phakathi kwawo esibala lawo angaphantsi koNkosi Cetshwayo owathi ngo-1879 woyisa umkhosi waseBritani eIsandlwana, ekhusela inkululeko yabantu bemveli belizwe lethu kunye nenkululeko yemihlaba yabo. Kwikhulu leminyaka enamashumi amathathu (130), sinokukhuthazwa kuphela lithemba kunye nokomelela okwaye kwangena kwezo ntliziyo zikhaliphileyo. Kumaziko emfundo, kwa oku komelela kunye kwaye kwaphemba umlilo wokomelela kwiindimbane zabantu ngexa lobusika obabubanda kakhulu emva kokuvalwa umlomo kombutho wenkululeko kunye nokubanjwa koninzi lweenkokheli zalo eziphambili.
Iqela labafundi abakhaliphileyo baye bakreqa kwi-NUSAS baze baseka uMbutho wabaFundi boMzantsi Afrika (SASO) kwiminyaka engama-40 eyadlulayo.
Kwesi sizukulwana kukho iinkokheli zokuqala ze-SASO, eziquka: oo-Strini Moodley, Njingalwazi Barney Pityana, Steve Biko, Onkgopotse Tiro, Harry Nengwekhulu, Themba Sono, Mapetla Mohapi, Mosioua Lekota, Johnny Issel noMthuli ka Shezi. Ngokufaka ithemba ngexesha lokulahlekelwa lithemba, sibothulela umnqwazi. Ngokuphathelene noku, sinqwenela ukukhahlela umzala ka Onkgopotse Tiro, u-Pat Tlhagwana. Kulo mxholo sikwanqwenela ukuvuma ongasekhoyo u-Ephraim Mogale, uMongameli owaseka kwiminyaka engama-30 eyadlulayo uMbutho wabaFundi woMzantsi Afrika (COSAS), namaqabane akhe. Xa sikhumbula aba bafundi bamaxesha angaphambili siye sibe nomyalezo osibophelelayo, wokuba ukunxanelwa inkululeko nolwazi kutshisa ngamandla kakhulu ezifubeni zolutsha lwethu. Umyalezo wezenzo zabo zobugorha isakhenkceza nanamhlanje njengoko kwaba njalo kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ekubeni kufuneka sandise imida yamathuba; kwaye ngokwenene, ngamagama oMqulu weNkululeko, kuvulwe ngokubanzi ngokungaphaya iingcango zokufunda nenkcubeko!
Asiyilibali le mibutho neenkokheli kuba zifake umoya wethemba nokomelela okwenza kuhambele phambili umzabalazo wedemokhrasi nakuba yonke into yayibonakala imfiliba; ngokunika ugxininiso kwimfanelo esemagxeni ethu ekuqhubeleni phambili imisebenzi olwazenza idini kuyo uninzi lwabantu, bengafuni ukoyikiswa zizinto ezibabuyisela umva nobunzima. Ke ngoko ke, Nkosikazi Somlomo noSihlalo oBekekileyo, kufuneka sizibuze ukuba, ingaba izenzo zethu ziyichaze njani indlela yophuhliso loluntu loMzantsi Afrika kwiminyaka elishumi elinesihlanu ukusukela ekuzalweni kwedemokhrasi yethu, kwaye siluqhubele njani phambili uphuhliso loluntu kunye nesidima soluntu ukusukela kwigunya ledemokhrasi lika-2004!
Namhlanje sinenkqubo yedemokhrasi esebenza kakuhle, esekelwe kwimithetho-siseko yokungafihli nto kunye nokuvuleleka, enemigangatho emininzi yothabatho nxaxheba loluntu kunye namaziko azimeleyo agunyaziswe nguMgaqo-siseko uba axhase idemokhrasi. Kwiminyaka edlulileyo, siye saphucula ngokuthe chu imibutho yolawulo. Siye saseka indlela yonxulumano oluphakathi kurhulumente kumacandelo onke, kwaye saphucula uhlanganiso ngaphakathi naphakathi kwawo.
Ngokwenene, urhulumente makazingce ngokuba siye satshintsha ukwakheka kwenkonzo karhulumente ukuba mayibandakanye lonke uluntu, nto leyo esondeleyo kubunjani boluntu lwethu ngenxa zonke.
Nakuba, abasetyhini besenza malunga nama-34% azo zonke izikhundla eziphezulu kwinkonzo karhulumente, oku kuyasilela kobekujoliswe kuko kokulinganisa ebesizibekele kona. Kumabakala ezindlu zowiso-mthetho zesizwe nezamaphondo, kubonakala ngathi isizwe kulo nyaka siya kodlula kuma-32% omgangatho wokumelwa ngabasetyhini owaphunyezwa ngo-2004 kwaye ngethemba, nakuma-40% aphunyezwa ngonyulo boorhulumente beengingqi luka-2006. Siyathemba ukuba onke amaqela ezopolitiko, njengoko egqibezela uluhlu lwawo lonyulo, aya kufaka isandla kulo mzamo unesidima kangaka! Nangona kukhona inkqubela eyenziweyo, eli-0,2%, imeko ayiphucukanga kangako ngokuphathelene nabantu abakhubazekileyo abaqeshwe kurhulumente, xa kulinganiswa ne-2% ebesijolise ukufikelela kuyo. Kuzo zombini ezi zikhankanyiweyo icandelo labucala lisasalele emva kakhulu.
Amanyathelo awohlukeneyo aye athathwa ukuphucula ukusebenza kwenkonzo karhulumente, kuqukwa nolawulo lwezimali, amaZiko eeNkonzo ze-Thusong kunye nokunye okuye kwavezwa okutsha kokufezekisa ukuhanjiswa kweenkonzo, izimbizo kunye, njengoko kusenzeka ngoku kwiSebe leMicimbi yezeKhaya, ubunkokheli obuqinileyo.
Nakuba kunjalo, kuninzi ekusafuneka kwenziwe ukuze kuphuculwe umkhwa weenkonzo kunye noqhelwaniso lomsebenzi kubasebenzi bakarhulumente ingakumbi abo basebenza ngqo noluntu. Njengoko anokuba ayazi amaLungu aBekekileyo, urhulumente wethu wenze ukuba umlo ochasene norhwaphilizo ibe ngomnye wemimandla engundoqo ekujoliswe kuyo. Oku kubonakaliswa, phakathi kwezinye izinto, kumthetho, imithetho nemimiselo elawula abasebenzi bakarhulumente kunye nababambi zi-ofisi abangosoopolitiki ngokufanayo, ubambiswano noluntu kunye noosomashishini, ngokunjalo neminxeba etsalwayo kuxelwe okuchasene norhwaphilizo.
Kusenokwenzeka ukuba iindlela zokuthintela kunye nokohlwayela urhwaphilizo azikoneli, kodwa ngokombono weendlela zikarhulumente, sinokuzithuthuzela ngokuba ngaphezulu kwama-70% amatyala orhwaphilizo axeliweyo kwabeendaba aye aziwe nguwonke-wonke kuba urhulumente ukubonile okungalunganga kwaye ngokwenene kukho into ayenzayo ngako.
Kwa le miceli-mngeni minye ijongene necandelo labucala. Ekugqibeleni, umceli-mngeni ukwamalunga nomthetho, kuba umalunga nokunyanzelwa kwawo okufanayo.
Ndiqinisekile ukuba sonke sivumile ukuba ukuphila koluntu lwethu kuxhomekeke, kakhulu, kwinkqubela esiyenzayo ekwandiseni ubutyebi besizwe kunye nokuqinisekisa ukuba ubuncwane bokukhula koqoqosho kwabelwana ngabo ngabantu xa bebonke.
Yinto eqhelekileyo eyokuba, emva kokoma kwezoqoqosho ekupheleni koo-1980 kunye nasekuqaleni koo-1990, uMzantsi Afrika uye waba nelona xesha lokukhula koqoqosho liye lazinza ukusukela ekubeni ukushicilelwa kwamanani aqokelelweyo okunjalo kwaqala ngo-1940. KwiShumi lemiNyaka yokuQala yeNkululeko, ukukhula koqoqosho kwaba yi-avareji ye-3% ngonyaka, kwaye oku kuphucuke kwaya kuma kwi-5% ngonyaka nge-avareji ukusukela ku-2004 ukuya ku-2007. Ngexa ukukhula kwabaxhasi, kukhuthazwa yingqesho kunye nengeniso enyukayo kunye namazinga okunyuka nokwehla kwemali namazinga enzala asezantsi, kukho indima okuyidlalileyo ngokuphathelene noku, sikhuthazwa liphulo elibanzi lamathuba lokunabisa ngokungaphaya kuye phambili.
Oku kuquka, kuqala, amazinga aphezulu otyalo-mali kuwo omabini amacandelo kwelikarhulumente nelabucala. Ngokuphathelene noku, kwiminyaka emihlanu edlulileyo, besixhathise kwi-16% yokwenziwa kwenkunzi engaguqukiyo kungekatsalwa nto kuyo njengepesenti yemVeliso yaseKhaya kungekaTsalwa nto kuyo (GDP). Oko ke iye yaba kukukhawuleziswa kutyalo-mali kwaye elo nani namhlanje limi kuma-22%, kufutshane nama-25% esithelekelela ukulifumana kuphela ngo-2014. Inxenye ethile yoku isisiphumo seenkqubo eziyilwe ngurhulumente zokwandisa izibonelelo zokusebenza zikarhulumente. Ikwasisiphumo semigaqo-nkqubo esokuphucula isimo sotyalo-malo lwamacandelo abucala, kunye nokuqhuba imigaqo-nkqubo yezoqoqosho neyemali ngendlela eyandisa ufikelelo kwiinkonzo kwaye yehlise umthwalo wokwehla nokunyuka kwamandla emali ngexa kwangaxesha nye iqinisekisa uzinzo kwisikeyile esikhulu sezoqoqosho nokugcineka kwaso.
Ujoliso kutshintsho loqoqosho oluncinane kwishumi leminyaka elidlulileyo, kunye neenzame, ingakumbi ukusukela ngo-2004 ngobuchule obungaphaya bokususa iintlobo ngeentlobo zemiqobo ekukhuleni luye lwaba neempembelelo ezintle.
Phantsi kwalo mxholo iPhulo lokuKhawulezisa ukuKhula ekwaBelwana ngako (AsgiSA) liyaphunyezwa, ukuqinisekisa ukuba zonke izithintelo ezinzima ezifana nemiqobo kwizibonelelo zokusebenza, umgaqo-nkqubo wezoshishino ohlanganisiweyo kunye neenkqubo, imiceli-mngeni yezakhono, ukungabikho ntshukumo kulawulo kunye nokwanela kweenkonzo zikarhulumente lulungiso ekugqaliswe kulo ngobuchule. Uqoqosho lwethu luye luvuleleka, kwaye ukusukela ngo-1994 luya luhlangana ngokuthe chu kwindlela yamazwe ngamazwe. Amaziko ethu ezimali angumzekelo omhle oye wasikhusela kwizaqhwithi zezoqoqosho zamazwe ngamazwe. Kananjalo, ububanzi bofikelelo kuluntu lwethu busahleli busezantsi kakhulu kunoko kulindelekileyo. Uqoqosho lwethu lusahleli luxhomekeke kakhulu kwezezembiwa nolimo ukuze kuthunyelwe kumazwe angaphandle. Ngaphandle kwakwicandelo leenkonzo, asibonanga kwaneleyo kumacandelo abalulekileyo, ingakumbi elokuvelisa. Ngenxa yoko, izinga lokukhula kwizinto ezithunyelwa ngaphandle khange libe phezulu njengakumazwe afana nathi. Bobu buthathaka ngqo obenza intsilelo enkulu ye-Current Account ingakumbi xa singena kwizintlu eziphezulu zokukhula.
Kwaye ngenxa yokuba sinamazinga asezantsi olondolozo, kuye kwafune ka ukuba sithembele ekungeneni nasekuphumeni kwenkunzi kwexesha elifutshane ukuxhasa intsilelo ngokunjalo neenkqubo zethu zotyalo-mali. Le yimiceli-mngeni ngokuqinisekileyo ekufuneka ilizwe lethu liyilungise ukuze liqhubele phambili. Okubaluleke kakhulu ngumbuzo wokuba: ngokwenene kufuneka ukukhula koqoqosho kube malunga nantoni? Ubutyebi benzelwa ukuphucula ubulunga bobomi babantu. Yiloo nto ke, umbuzo wokuba ukukhula emakwabelwana ngako ngokulinganayo kufuneka ibe ngundoqo wokuthathelwa kwengqalelo koqoqosho. Okubalulekileyo, ukwabelana ngeziqhamo zokukhula kufuneka kube nemisebenzi edalwayo, ukuqinisekisa ukuba kukho imisebenzi ephucukileyo. Ngokwenene, ngumba owenza ibhongo owokuba phakathi kuka-1995 no-2003, uqoqosho lwadala malunga nesigidi esinye esinesiqingatha semisebenzi nje emitsha; kwaye okubalaseleyo ngokungaphaya, malunga nemisebenzi engama-500 000 ngonyaka phakathi kuka-2004 no-2007.
Kweli thuba lakamva, ixesha lokuqala ukusukela ekufunyanweni kwedemokhrasi, imisebenzi emininzi yayidalwa kunenani labo batsha bangena kwimarike yemisebenzi, oko ke kusehlisa izinga lentswela-ngqesho ukusuka kuma-31% ngo-2003 ukuya kuma-23% ngo-2007.
Ngokwenene, oku kufuneka kungasuki kwisibophelelo sethu sokuqhuba sigocagoca umba wemisebenzi elungileyo, kuqukwa namalungelo kunye nezibonelelo ezonwatyelwa ngabasebenzi. Ukwabelana ngeziqhamo zokukhula nako kufuneka kuquke uphunyezo olukhawulezileyo lokunika amathuba abo babewavinjiwe ngaphambili, kuqukwa nokuNikwa kwabamNyama aMandla ezoQoqosho. Oku ayikokulandela loo nto kuthiwa yi-ajenda yobuhlanga, Ngokwenene, ilizwe elingaqinisekisi ukubandakanyeka kwabo bonke abemi balo kwimigangatho yonke yemisebenzi yoqoqosho ngokuqinisekileyo liyakusebnza ngaphantsi kunoko belizimisele ukukwenza.
Into yokuba icandelo labucala libe lisalele ngasemva ekutshintsheni ukubandakanyeka koluntu lonke kulawulo kunye nemisebenzi enezakhono, kuphuhliso lwamashishini njalo njalo kwenza ukuba ilizwe lethu lihambe kancinane ekukhuleni okuphezulu. Ukwabela ngeziqhamo zokukhula nako kuthetha indima eyoneleyo nenobulungisa kurhulumente ekusebenziseni okunxulumene nemali njengesixhobo sokwaba kwakhona kunye nokwabelana ngomthwalo wokubonelela ngempahla kawonke-wonke.
Amalungu aBekekileyo inokuba anolwazi oluninzi lwemicimbi enxulumene nemivuzo yoluntu. Koko ndiyakukhankanya iimeko ezimbalwa kwakhona ukuze ndibonise ubunjani benkqubela esiyenzileyo kunye nemicelo mngeni esijongene nayo. Urhulumente ubuhlungu xa eqonda ukuba ubuhlwempu obunzima busanabile kuluntu lwethu, kwaye umgangatho wokungalingani uphezulu kakhulu.
Kule minyaka ili-15 idlulileyo siye senza konke okusemandleni ethu okulwa esi sibetho ngomvuzo wezentlalo. Sicaphula kumsebenzi oqhutywe liqela lezifundiswa kwiYunivesiti yase-Stellenbosch, elikhokelwa nguNjingalwazi Servaas van der Berg:
Okokuqala, ubuhlwempu buye behla kakhulu ukusukela ekutshintsheni ikhulu leminyaka. Ukwehla kakhulu kungenxa yokwanda kakhulu kwenkcitho yenkxaso-mali yoluntu ukusukela ngo-2002 ukuya phambili. Le mpucuko ibonwa ngofikelelo kwiinkonzo ezisisiseko ukwehla ngokukhawuleza kubuhlwempu be-asethi kuye kwade kwakhokelela ekwehleni kubuhlwempu. Okwesibini, nangona ukwehla kubuhlwempu kukukhulu, ukungalingani kuphelele kunyukile ngoo-1990. Okwesithathu, ukuguquka okuhamba nobuhlwempu nokungalingani kumisela isimo ngokubanzi komgaqo-nkqubo[U] buhlwempu behlile ukusukela kwinguqu, kodwa ukungalingani akuphucukanga. (Poverty since the transition: What we know, p8: van der Berg et al, August 2007)
Kwiinkcukacha zomba onzima, abaphandi baqwalasele ngokungaphaya ukuba:
Phakathi kwemizi equka abantwana (abachazwa njengabo baneminyaka eli-17 nangaphantsi), inani lemizi elixela ukuba umntwana ulambile lehlile kakhulu ngokungaqhelekanga (ukusuka nje kuma-31 eepesenti ukuya kwi-16 yeepesenti) phakathi kuka-2002 no- 2006. Oku kuthetha ukuba isimo sobuhlwempu sehle ngokubalaseleyo, ingakumbi kwabo bantu bahlupheka kakhulu. Ubukho jikelele bendlala phakathi kwabantwana buye behla ukuya kwisiqingatha kwiminyaka emine edlulileyo.
Ngokwenene, le ngqwalasela iqinisekiswa luphando lwethu, olubonisa ukuba ubuhlwempu kwingeniso ingakumbi kuluntu olumNyama nolweBala behlile, nxenye yoko yenziwa ngamazinga aphezulu engqesho kunye nofikelelo kwiinkxaso-mali zentlalo. Ngenxa inani labaxhamli nkxaso-mali lali-2,5 yezigidi ngo-1999, ngo-2008 oku kunyuke ukuya kuma kwi-12,4 yezigidi.
Oku kakhulu kungenxa yokwanda okukhulu kufikelelo kwiNkxaso-Mali yeSondlo sabaNtwana, okunyuke ukusuka kubaxhamli abangama-34 amawaka ngo-1999 ukuya kwi-8,1 yezigidi ngo-2008. Njengenxenye yokufaka isandla kwingeniso yabahluphekayo, okujoliswe kuko ngamathuba emisebenzi esisigidi esi-1 ngeNkqubo yeMisebenzi kaRhulumente eyaNdisiweyo yaye yaphunyezwa ngo-2008, kwangoko ngonyaka kunoko kwakucingelwe kwigunya lonyulo luka-2004. Oku kwenze ukuba kubekho indlela yokwandisa inkqubo kunye nokuphucula ubulunga bayo.
Ngokuphathelene nokufikelela kwemizi kwiinkonzo ezisisiseko, amanani azixela ngokwawo. Njengokuba, ufikelelo kumanzi aphathekayo kuphucuke ukusuka kuma-62% ngo-1996 ukuya kuma-88% ngo-2008; umbane (58% ukuya kuma-72%); kwaye ugutyulo (52% ukuya kuma-73%).
Ubungqina kumvuzo wentlalo bukwabonwa ngempucukp enkulu ekufikeleleni kwizibonelelo zempilo ezisisiseko. Ama-95% abemi boMzantsi Afrika ngoku ahlala kwiikhilomitha ezi-5 zezibonelelo zempilo; kwaye sazisiwe ukuba zonke iikliniki ngoku zinofikelelo kumanzi abalekayo. Ugonyo lwabantwana luyonyuka ngokuthe chu ukuya kuma-85%; kwaye izehlo zemalariya zehle kakhulu. Sikwakhuthazwa kukuba uphando kubukho jikelele bentsholongwane kaGawulayo lubonisa uzinzo kunye nokwehla kancinane kumazinga osulelo.
Ngokungaphaya, inkqubo yethu yonyango lwezilwa-ntsholongwane (antiretroviral) ayiyiyo kuphela nje enkulu ehlabathini kodwa iyanda maxa onke, inamalunga nezigulane ezingama-690 000 eziqaliswe kunyango lwe- lwezilwa-ntsholongwane ukusukela ekuqaleni kwenkqubo. De kube ngoku izibonelelo ezininzi zempilo zihlala zingenawo amayeza afunekayo, imigangatho efanelekileyo yabasebenzi, neenkonzo ezisisiseko ezifumaneka rhoqo ezifana namanzi ahambayo acocekileyo kunye nombane. Kwezinye zezi zibonelelo, ulawulo luyalambatha kwaye ukuziphatha kwabasebenzi kufunwa ukuphuculwa.
Kwimfundo, siye sabona ukwehla kwirashiyo katitshala: umfundi; phantse ufikelelo ibe lufikelelo oluvuleleke kuwonke-wonke ngokobhaliso kumgangatho wezikolo zamabanga aphantsi, kunye nokuphucuka kwinani labafundi abaphumelela imathematika, ukuxela imizekelo embalwa. Kwangaxesha nye, kwenziwe umzamo omkhulu wokuphucula izakhiwo kwimimandla ehluphekayo. Kakade siyazi ukuba izinga labayekayo ukufunda kumanqanaba emfundo ephakamileyo kunye nemfundo enomsila liphezulu ngokungamkelekiyo, kwaye inkqubo yemfundo kusafuneka ukuba iveze iintlobo eziyimfuneko zezakhono zemfundo ezifunwa luluntu
Ukongeza, intsingiselo ekusebenzeni, ngokokufundisa kunye nokufunda, ibonisa ukuzinga kokohlukana ngokwezentlalo kwangaphambili.
Okuphoxayo kukuba, apho imfundo ifuneka ngamandla ekuncedeni ekupheliseni ubuhlwempu, kulapho kungekho khona izibonelelo zokusebenza, ulawulo kunye nootitshala. Iinkqubo zentlalo zikarhulumente nazo zikuphucule okusisiseko kwabahluphekayo ngokohlobo lwezindlu ngeenkxaso ezi-2,6-zezigidi ezinikiweyo. Kakade kufuneka sivume ukuba inkqubo yolwabiwo lomhlaba ngokunjalo nenkxaso yasemva kwalo ngabe iphethwe ngcono nangokukhawuleza. Xa kukonke, sinebhongo ngenkqubela kwiinkqubo zethu zentlalo. Kodwa ngeke sizonelise ngotshintsho nje oluninzi. Nokuba kwimfundo, impilo, kwezezindlu, amanzi nogutyulo, umbuzo ongundoqo esijongana nawo yonke imihla ngowokuba siwuphucula njani na umgangatho wezi nkonzo! Koko isende indlela ekusafuneka siyihambe. Malungu aBekekileyo;
Isibetho solwaphulo-mthetho sihleli sisisibetho esingundoqo wokungakhuseleki kubemi boMzantsi Afrika. Amava emihla ngemihla, kwiindawo ezihluphekayo nezityebileyo ngokufanayo, yenye yezinto ezixhalabisayo kuba kuhlala kunokwenzeka kube khona uhlaselo olunobundlobongela.
Kumaziko karhulumente nawabucala, ukubakhona kwezikim ezingcolileyo ezithatha yonke imithombo oko zikwenza ngorhwaphilizo kuhlala kuyinto ekhathaza kakhulu leyo Kakade, izinga lolwaphulo-mthetho xa lulonke, njengokuba lalonyukile ngo-2002, lehlile ngokugaguqukiyo. Zonke iintlobo zinokoyanyaniswa zingqinele oku. Kodwa siyazi ukuba ukwehla akukhawulezanga kakhulu, hayi nangezinga le-7-10% ebesizibekele lona kwiindidi ezahlukeneyo zokulwa ulwaphulo-mthetho. Into yokuba izehlo zophango olunobundlobongela emizini kunye nakumashishini zinyukile, kwaye ulwaphulo-mthetho olubhekiswe kwabasetyhini nasebantwaneni lungadanjiswanga ngawo nangawaphi na amanyathelo abonakalayo, ngumba okhathaza kakhulu ke lowo.
Oku kukhomba kubuthathaka kubumelwane bethu, ingakumbi ekwakhiweni kokubambana kwimbumba yamanyama kuluntu okuya kusinceda ukuba sithintele kwaye silwe ulwaphulo-mthetho. Oku kukhomba ubuthathaka kwindlela yobulungisa kulwaphulo-mthetho, ukusukela ekuphandweni kwamatyala ukuya ekolulekweni kwaboni. Ikhomba ubuthathaka ekusebenzeni ngamandla kwenkqubo yeenkundla, ngokobugcisa kunye nezinye izakhiwo kunye nolawulo. Le yimiba yenkqubo yobulungisa kulwaphulo-mthetho ebanzi elungiswe ngokutsha eqalileyo ukuyilungisa. Kananjalo, ekuzihlabeni amadlala, kufuneka singalahlekani nento yokuba into esiyihlolayo yinkqubo eyonwabela, kakhulu, ukuba semthethweni okwake kwehla elizweni lethu. Oku kungenxa yotshintsho olwenziwe ngala maziko, ngokwemigaqo-nkqubo yawo ngokusekelwe kwinkcubeko yamalungelo oluntu, ukwakhiwa kwawo ngokwedemografi, kunye neenkqubo zawo zokuthathela kuwo uxanduva. Kodwa masingazikhohlisi: kuba ngobomi bethu xa bubo ke bentlalo, utshintsho olunjalo lusekumabakala asakhulayo. Isende indlela ekusafuneka siyihambe.
Ndiqinisekile ukuba amaLungu aBekekileyo ayakuvuma ukuba uluntu lolawulo olwazelelayo lwedemokhrasi yethu lunokufumana intsingiselo ukuya kuma apho sinika khona ingqalelo kwabona bangakhuselekanga kuluntu.
Ngokuphathelene noku, siye saqinisekisa ukuba iinzame eziluqilima ziyenziwa ukuphucula iimeko zabantwana, abasetyhini, abantu abakhubazekileyo kunye nabadala oko kusenziwa ngomthetho kunye namaphulo. Ngamaphulo enkxaso kwaye nangenxa yokubambisana esiye sakwenza kunye nemibutho emele la maqela abuthathaka, siye sakuphucula ukuqonda okujikeleze imiba ewachaphazelayo kwaye kwakhuthazwa ngenkqubela ukuhlanganiswa ngokuqhelekileyo kwezi zinto zikhathazayo. Kusenza sibe nebhongo kakhulu, umzekelo, owokuba imizi ephethwe ngabasetyhini ibe yiyo efumana isabelo esikhulu kune-avareji somvuzo wezentlalo kuqukwa nezindlu kunye nokhathalelo lwempilo, kunye nokuba phakathi kweenkqubo eziphumeleleyo kubekho amaphulo kugonyo kunye nezondlo zabantwana. Ufikelelo kwingqesho kunzima kakhulu kwabasetyhini basemaphandleni, kulutsha kunye nakubantu abakhubazekileyo. Intsholongwanekagawulayo ineempembelelo kakhulu kwabasetyhini abasebatsha. Ubundlobongela obubhekiselwe kwabasetyhini nasebantwaneni buphezulu kakhulu.
Yonke le misebenzi yeyexesha elizayo.
Nkosikazi Somlomo kunye noSihlalo oBekekileyo;
Le ke yenye yenkqubela eze nedemokhrasi, kunye nenkqubela eyenziwe ngurhulumente ekufezekiseni igunya labavoti. Akukho mpikiso yokuba, ngawo nawaphi na amanyathelo, inkqubela eyenziwe ukusukela ngo-1994 iyakhuthaza. Kodwa akunakubakho mathandabuzo okuba isemininzi imiceli-mngeni esekhona. Kufanelekile ke ngoko ukuba sizikhumbuze ngaloo myalelo wethemba nokomelela, inkqubela notshintsho, walowo wayesakuba nguMomgameli Nelson Mandela, kwincwadi engobomi bakhe ethi, Long Walk to Freedom:
Ndiyihambile loo ndlela inde iya enkululekweni. Ndizamile ukuba ndingagevezeli, ndiye ndakhubeka endleleni. Kodwa ndiye ndafumanisa imfihlo yokuba emva kokonyuka intaba ende, umntu uye afumanise ukuba ziseninzi ezinye iintaba ekusafuneka azinyuke. Ndithathe umzuzu apha wokuba ndiphumle, ukuba ndijonge okuhle okundijikelezileyo, ndijonge emva kumgama esele ndiwuhambile. Kodwa ndinokuphumla nje umzuzwana, kuba inkululeko iza neemfanelo, kwaye andinakuzilibazisa, kuba uhambo lwam olude alukapheli.
Kwiinyanga ezimbalwa ukusuka ngoku abantu bezwe lethu bayakubhengeza iinkokheli abazifunayo ukuba ziqhubele phambili umsebenzi omhle walo mlweli nkululeko mkhulu kangaka kunye nabanye abaseki bedemokhrasi yethu.
Ngexa iindlela esizisebenzisayo zinokwahluka, iinjongo ekufuneka sijolise kuzo zicacile kwaye zibekwe ngokungaxandanga kuMgaqosiseko wethu: yeyokudala indawo yabantu emanyeneyo, engenalo ucalulo, engacaluli ngokwesini, enedemokhrasi nenempumelelo edlala indima entle ekwakheni ilizwe elingcono. Kwiminyaka emithandathu edlulileyo, iinkokheli zabantu bethu zaye zahlangana kunye kwiNgqungquthela yoPhuhliso nokuKhula zaze zafikelela kwisivumelwano ngemisebenzi ekufuneka sonke siyenze ukuphucula ubulunga bobomi babemi boMzantsi Afrika, ingakumbi ekwehliseni ngesiqingatha intswelangqesho kunye nobuhlwempu ngo-2014. Ezi zivumelwano ziquka:
Ukudala imisebenzi emininzi, imisebenzi engcono nomsebenzi ophucukileyo wabantu bonke oko kusenziwa ngamazinga aphezulu otyalo-mali, iinkqubo zemisebenzi yoluntu, ubambiswano nezicwangciso zamacandelo, inkqubo yokufumana imisebenzi kwingingqi, ukuphakanyiswa kwamashishini amancinane nenkxaso yookopoletyeni beenkampani; Ukulungisa umceli mngeni wotyalo-mali ngokuphucula ulondolozo, ukusa ngokufanelekileyo izibonelelo ukusuka kumhlalaphantsi nakwiingxowa-mali zobekelo, izindlu, imirhumo yecandelo lezimali kunye nokunikwa kwabamnyama amandla ezoqoqosho; Ukuqhubela phambili ubulungisa, ukuphuhlisa izakhono, ukudala amathuba ezoqoqosho kunye nokunabisa iinkonzo; kunye Namanyathelo athathwa kwingingqi kunye nophumezo lophuhliso, kuqukwa nolungiselelo lwezakhiwo kunye nofikelelo kwiinkonzo ezisisiseko. Ndiqinisekile, ukuba, njengenxenye kunye nokongeza, kwezi njongo abeMi boMzantsi Afrika ngeke bohluke ngokuphathelene nemfuno yokuphucula inkqubo yethu yemfundo; ukunika ukhathalelo lwempilo olwaneleyo, oluphucukileyo nolunobulungisa, ukuphuhlisa imimandla yethu yasemaphandleni kunye nokuqinisekisa ukhuselo lokutya; kunye nokomeleza umlo ochasene nolwaphulo-mthetho norhwaphilizo.
Ndibala le miba hayi ngenxa yokuba iquka konke okanye ngenxa yokuyibala siyakulungisa zonke izinto ezingalunganga kuluntu lwethu. Kunoko, ndikhethe ukwenza oko ukugxininisa into yokuba uMzantsi Afrika awehlelwa bubuhlwempu bemithetho-siseko. Umceli-mngeni wethu kukuguqulela le mithetho-siseko ube ziinkqubo neeprojekithi zophunyezo olusebenzayo.
Le mithetho-siseko ingqinwa phantse lulo lonke uluntu, njengoko ibonisiwe kwiiNjongo zoPhuhliso zesiGaba seXesha leWaka leMinyaka seZizwe eziManyeneyo.
Kwaye kananjalo uluntu namhlanje lujongene nengozi yokuba ukuphunyezwa kwezi njongo kunokumiselwa elinye ixesha ngeminyaka emininzi, xa ingengomashumi eminyaka, njengesiphumo sobunzima bezoqoqosho obujikeleze ilizwe xa lilonke. Into, eyaqala ehlabathini, njengobunzima bezoqoqosho kumaziko ambalwa abolekisa ngemali yaye yagcwala ihlabathi lonke, yaba neziphumo ezibi kwiimveliso ezisisiseko nakurhwebo.
Sinokukuhlaba amadlala ukunyoluka, ixesha elifutshane kunye nokungabi nankathalo kwabaphathi beenkampani ezinkulu ezenze ukuba ubunzima bukhawuleze. Singayigxeka imigaqo-nkqubo yoorhulumente eye yangakujongi okungundoqo kwaye yanika iimvume ezinokunyoluka zeemalike ezingalawulwayo ukuba zibange umonakalo kwiinkqubo zezimali. Sinokukwenza konke oku; kwaye siyakungqinelwa ngokufanelekileyo.
Ngexa umsebenzi wethu ongundoqo nekufuneka wenziwe ngoku ikukuzibulela iziphumo zolu phuhliso kuqoqosho lwethu kunye nakummandla wethu, ngoku kufuneka siveze iimpendulo eziya kunciphisa iimpembelelo zalo ingakumbi kuloo macandelo abuthatha oluntu lwethu. Into esiyaziyo kukuba okusingqongileyo okulawulayo elizweni lethu kunye nomgaqo-siseko wengeniso zemali ochasene nokungazinzi koqoqosho esiye sayamkela iye yasinceda ukuphepha iimpembelelo ezimbi zobu bunzima.
Kodwa siqonda sonke ukuba, ngenxa yokuba sihlanganiswe ngamandla kuqoqosho lwelizwe, imfuno yempahla yethu ethunyelwa ngaphandle yehlile; ufikelelo kwizimali kunye nokungena kwenkunzi kuye kwajika kwamandundu; imfuno esezantsi iye yawisa imveliso; ukudalwa kwemisebenzi kuchaphazeleke kakubi kwaye kwamanye amacandelo udendo luye lwenzeka ngokwenene.
Obu bunzima buye bangqamana nexesha apho ukuhla nokunyuka kwamaxabiso kunye namazinga enzala ebese phezulu kakhulu.
Ludityanisiwe, olu phuhliso, lwenza iingeniso esizifunayo zokwandisa ulungiselelo lweenkonzo kunye nokuphumeza iiprojekithi zezakhiwo zethu. Nakuba kunjalo, siye sanyanzeleka ukuba sehlise iingqikelelo zethu ngokokukhula kunye nokudalwa kwemisebenzi.
Siyazi nathi ukuba uMzantsi Afrika awuchaphazelekanga ngokumandundu kangako kunamanye amazwe amaninzi. Ngokwenene, ngexesha elo amanye amazwe ebehlelwe okanye ejonge ukuwa, uMzantsi Afrika kunye nenxenye yelizwekazi basakulungele ukukhula, nokuba kungezinga elincinane na. Ngokuphathelene noku, Malungu aBekekileyo, ndinovuyo lokunixelela ukuba ukudibana okuphakathi kwe-ofisi kaMongameli kunye neenkokheli zamaqabane ezentlalo awohlukeneyo, savumelana ngokuhlangeneyo ukuba siyile iindlela eziya kunciphisa obu bunzima kuluntu lwethu. Iqela elonyulelwe lomsebenzi elisebenza ngale micimbi lisasebenza ngamandla, kwaye ezi ndidi zeempendulo zilandelayo kusaxoxwa ngazo:
Okokuqala, urhulumente uyakuqhuba ngeeprojekithi zakhe zotyalo-mali kuwonke-wonke, xabiso lazo elo ke linyuke laya kuma kwizigidi zezigidi ezingama-R690 kwiminyaka emithathu ezayo. Ngokuphathelene noku, apho kukho khona imfuneko siyakuyila iindlela zokunyusa imali. Oku kuyakuquka inkxaso evela kumaziko ethu ophuhliso kunye nenkxaso yemali-mboleko evela kwii-arhente zamazwe ngamazwe, ngokunjalo nobambiswano kunye necandelo labucala kunye nokusetyenziswa kwezibonelelo ezilawulwa ngabasebenzi ezifana neengxowa-mali zomhlalaphantsi. Okwesibini, siyakwenza kuqine iinkqubo zengqesho kwicandelo likarhulumente. Kwelinye icala, amacebo okwandisa ingqesho kumacandelo afana nelempilo, lentlalontle, imfundo kunye nee arhente zokunyanzeliswa komthetho aya kuqhuba. Kwelinye icala, siya kukhawulezisa ukungena kwesigaba esilandelayo seNkqubo yeMisebenzi kaRhulumente eYandisiweyo. Okwesithathu, amanyathelo okuthomalalisa anokuqalwa kwicandelo labucala ukuze kuchaswe ukwehla okugqithisileyo kutyalo-mali kunye nokuvalwa okungeyomfuneko kweendawo zeemveliso okanye imizi mveliso. Ngokwecala lakhe, urhulumente unokukhuthaza amaziko alungiselela ukuxhaswa kwamashishini kunye nezinto eziza kwenza umtsalane ukunceda ekujonganeni nemiceli mngeni kumacandelo awohlukeneyo, kunye nokunceda aphuhliso ezimali ukuba ancede iifem ezisebunzimeni ngenxa yobunzima bezimali. Kuyakujongwa ezinye iindlela kunokuba kudendwe, kuqukwa iiholide ezinde, uqeqesho olongeziweyo, imisebenzi yexesha elifutshane nekwabelwana ngayo. Oku kuyakudityaniswa nokuphakanyiswa kwephulo lokuba neQhayiya ngokuba ngowaseMzantsi Afrika kunye namanyathelo angqongqo kwizinto ezingeniswa elizweni ngokungekho mthethweni.
Okwesine, urhulumente uyakugcina kwaye andise inkcitho yentlalo, kuqukwa nokolula ngokuqhubekayo inkxaso-mali yesondlo sabantwana abaneminyaka eli-18 yobudala kunye nokwehlisa iminyaka yokufanelekela umhlalaphantsi iye kuma-60 emadodeni.
Ukongeza, siyakusebenzisa ngokungaphaya iNkxaso yokuNika isiQabu kwiNtlupheko eNtlalweni kunye namanyathelo okhuselo lokutya kwaye kwakhona sijolise kwabo mhlawumbi bangekho phantsi kokhuselo lweNgxowa-mali ye-Inshurensi yokungaSebenzi okanye abo bazisebenzise bazigqiba izibonelelo zabo.
Siyakuqhuba kwakhona sinika ingqwalasela ekhethekileyo kumceli mngeni wokuziphatha okungafikelelekiyo ngakwicala lezinye iinkampani zethu. Ngokuphathelene noku, singathanda ukwenza isindululo sokuba iKomishini yoKhuphiswano ibe nesandla esiqinileyo esibonisayo ukuqinisekisa ukuba aboni bayabanjwa.
Siyathemba ukuba uluntu luyakunyusa eyawo imigangatho yobutsha ntliziyo ukuqinisekisa, phakathi kwezinye izinto, ukuba njengoko amaxabiso ezinto esehla, iziqhamo ziviwa ngabemi xa bebonke.
La manyathelo ayakuvuselelwa yimithetho-siseko yomgaqo-siseko wengeniso zemali ochasene nokungazinzi koqoqosho. Koko, siyakuqinisekisa ukuba amanqanaba okuboleka enziwa ngurhulumente anobulumko kwaye agciniwe. Oku kukwaquka nokwehliswa ngokukhawuleza kwamanqanaba etyala karhulumente nanini iimeko zisiba ngcono. Iinzame zethu ziyakuvuselelwa kukwazi ukuba amanyathelo okukhusela okusingqongileyo kunye nokudambisa iimpembelelo zokutshintsha kwemozulu nawo anokufaka isandla ekudalweni kwemisebenzi. Kwiintlanganiso ze-G20 kunye nezinye iindibano kumaziko ahlangeneyo urhulumente wethu uye walwela ukubandakanyeka okufanelekileyo nokungamandla ingakumbi kumazwe aphuhlileyo apho ubunzima buqale khona kwaye bumandundu khona. Siyakholwa ukuba lifikile ixesha lokwandisa umthetho wasekhaya kunye nokuhlola inkqubo yezimali, kodwa ngaphaya koku, uqwalaselo kunye namanyathelo kwisikeyile samazwe ngamazwe akwenzekanga ukuba aphetshwe kwaye aba yimfuneko.
Okubalulekileyo, kufuneka kwakhona sikhusele indlela yorhwebo yehlabathi, sigqibe uthetha-thethwano oluqhubayo ngoku kwi-Doha Round yothetha-thethwano lorhwebo lwehlabathi, kwaye kuqinisekiswe ukuba uncedo alwehliswa. Isifundo esibophelelayo esivela kula mava sesokuba sifuna ubambiswano oluluqilima phakathi kwabo kukho indima abayidlalayo kwezoqoqosho kwisikeyile sasekhaya nesamazwe ngamazwe, hayi kuphela ukususa iimpembelelo zobunzima, kodwa kwakhona ukuthatha amanyathelo anokuthintela ukwenzeka kwakhona.
Kwilizwe lethu, siyakwenza le misebenzi njengenxenye yenkqubo yokubeka uluntu lwethu kwindlela ephezulu yokukhula kunye nophuhliso. Ubude bexesha ngokubhekisele ekufumaneni indlela ephezulu inokuba yolulekile ngandlela thile. Kodwa asithandabuzi ukuba liza kufika msinyane elo thuba kunokuba lifike sekudlule ixesha.
Ngokuphathelene noku, indlela esilimisa ngayo ilizwe lethu ukuba lithathe amathuba eza kwicala lethu, iya kubaluleka kakhulu. Apha ke ndibhekisela kakhulu kwiNdebe yeHlabathi ye-FIFA yango-2010 ngokunjalo neNdebe yoManyano eza kuba kwiinyanga ezimbalwa ukusuka ngoku. Phantse zonke iiprojekithi kunye namacebo zigqityiwe okanye sele ziza kugqitywa ukusuka kumabala ezemidlalo, izakhiwo zothutho, amanyathelo okhuseleko, imiba yeendawo zokuhlala, ukuya kumacebo empilo nemfuduko oko kuqinisekisa ukuzithemba kommandla webhola ekhatywayo yamazwe ngamazwe okuba owethu umnyhadala uya kuba nempumelelo.
Kwaye sikholelwa ekubeni, emva kokuphumelela kahlanu ngokulandelelana, iqela lesizwe lebhola ekhatywayo ngoku lizithemba ngokungaphaya kwaye lizilungiselela ukudlala ngokungaphaya kunokulindelekileyo!
Kodwa ngaphaya koku, ilifa lokwenene lalo mnyhadala liya kuba sekubeni nako kwethu ukubonisa uMzantsi Afrika nobubele base-Afrika nobuntu ukutshintsha kanye indlela ilizwe lethu kunye nelizwekazi lethu elibonwa ngayo ngabantu behlabathi. Oko kuxhomekeke kuthi sonke, kwaye ngoko ngeke sifake xabiso!
Sikwathi halala kumaqela ethu ezemidlalo aye aligcina iphupha loMzantsi Afrika lokufuna ukugqwesa kunyaka ophelileyo. Imbeko yethu ekhethekileyo iya kwiqela lethu lekhrikethi elinyuke laya kuma emanqwanqweni aphezulu ehlabathi.
Ngokwenene siziiNtshatsheli zeNdebe yeBhola yoMbhoxo yeHlabathi; u-Giniel de Villiers neqela lakhe baphumelele i-Dakar Rally; Abadlali bethu abakhubazekileyo baqhubile ukusenza sibe nebhongo, kwaye iqela lethu lebhola ekhatywayo labaminyaka ingama-20 baqhube kakuhle kwimidlalo ebinokhuphiswano ngokugqithisileyo.
Nkosikazi Somlomo noSihlalo oBekekileyo; Kwiiveki nje ezimbini eziphelileyo, uMzantsi Afrika ugqibezele neMali uvimba wokulondoloza imibhalo-ngqangi yakudala ye-Timbuktu. Le ndyebo ityebe kangaka ikhomba e-Afrika njengemqondiso wezenzululwazi noncwadi, ifilosofi norhwebo, oluphazanyiswa lurhwebo ngamakhoboka kunye nokungxamela ukufumana yase-Afrika. Eli phulo kufuneka lisikhuthaze ekubeni sisebenze kumboniso kunye namanye amazwe akwilizwekazi lethu kwaye libonise ngokungaphaya ngcono imeko yoluntu. Ngokwenene, kwiminyaka eli-15 elidlulileyo khange sizilibazise iinzame zokuqinisekisa ukuba i-Afrika ivuselelwa ngendlela yokuba ibe yintoni kanye ekufuneka kusetyenzwe ngayo kwiNkulungwane ye-Afrika. Kancinane kodwa ngokuqinisekileyo, ilizwekazi lethu liqhubela phambili libhekise ekuvuselelweni ngokutsha, kunye nomdla wabantu balo unyuka usiya phezulu kwii-ajenda zeenkokheli zabo, oko ke kubethelela ithemba kunye nokomelela kwalo kwibakala lehlabathi. Koku, kwaye koku kuphela, kufuneka sithi gqolo ukunceda abantu baseZimbabwe ukuba bafumane isisombululo sexesha elide kwintlekele ekwelo lizwe. Ngokuphathelene noku sinqwenela ke ukuthi halala kumaqela onke e-Zimbabwe ngokufikelela kuthetha-thethwano, ngokufezekisa elona bhaso lokugqibela ebelihleli lingumnqweno wabantu belo lizwe kunye namazantsi elizwekazi ngokubanzi: oko kukuthi, urhulumente ozinzileyo nosemthethweni osele uzilungiselele ukulungisa imiceli-mngeni ejongene nabantu. Sikhuthazeke kakhulu kukuba, izolo, iPalamente yase-Zimbabwe iye yaphumeza uHlaziyo lwe-19 loMgaqo-siseko, elithi thaca isiseko sokumiswa kukarhulumente oquka abantu bonke. Ngokuphathele noku singakhankanya ngokukhethekileyo umququzeleli we-SADC, owayesakuba nguMongameli Thabo Mbeki kunye neqela elisebenze ngokungadinwayo nangomonde ekwenzeni ukuba inkqubo ibe nesiphelo esinempumelelo.
Ngoku umsebenzi wokwakha ngokutsha unokuqala ngamandla kwaye uMzantsi Afrika sele ukulungele ukunceda naphi na xa unako. Ngokunxulumene noku, kukho imfuno engxamisekileyo yokunceda kule ntlekele ijongene noluntu kweliya lizwe. Sinethemba lokuba, kuba luyakhathala, uluntu lwamazwe ngamazwe luya kuzimanya nabantu base-Zimbabwe njengoko beza kuhamba indima entsha.
Sikwakhuthazwa nakukuba, nantoni na engenayo kunye neqalayo inokubonakala isenza inkqubela kubantu base-Democratic Republic of Congo endleleni yabo eya kuzinzo nasempumelelweni, loo nkqubela ayinakutshintshwa. Ubambiswano olusanda kwenziwe kutsha nje phakathi kweenkokheli zase-DRC nase-Rwanda lunika ithemba lenkqubela kwimiba yokhuselo kunye nasekusebenzeni ngeentlekele ezijongene noluntu; kodwa, ngethemba, kwakhona ngokuphathelene nengxoxo yezopolitiko. Kwakula manyathelo manye, siyakuqhuba sisebenza namanye amazwe kunye neManyano ne-Afrika ukufezekisa ezi njongo e-Burundi, Sudan, Ntshona Sahara, Cote d'Ivoire, Somalia nakwenye indawo. Njengoko sinokungqinelwa luphuhliso olwahlukeneyo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, uMzantsi Afrika uya kusebenzisa ilungelo elikhethekileyo lokuchophela i-SADC ukwandisa eli ziko lommandla libaluleke kangaka, ngogxininiso olukhethekileyo ngophumezo lwezisombululo zeNgqungquthela kunye nokolula umanyano olusisicwangciso sommandla.
Kwangaxesha nye siyakuphucula ukunxibelelana kwe-SADC kunye neMarike eQhelekileyo yaseMpuma kunye nakumaZantsi e-Afrika kunye noluNtu lwe-Afrika eseMpuma. La maphulo ayakuqalelwa ukwandisa kunokuba enze buthathaka iseti enzulu yonxulumano esilonwabelayo kunye neManyano yokuziPhatha yamaZantsi e-Afrika.
Ngeli thuba sinqwenela ukuthi halala kubantu kunye neenkokheli zase-Zambia, Ghana naseMelika ngonyulo olube yimpumelelo kakhulu olude lwavala nemida emnxinwa kumazwe abo.
Siyakuhlala sifuna ukuyandisa intsebenziswano nalamazwe kunye namanye amazwe kuba silandela okulungileyo eluntwini.
Sinelungelo elikhethekileyo lokuba kulo nyaka sibe sigqiba ishumi leminyaka lokuqala lobudlelwane bethu bezozakuzo kunye ne-Peoples Republic of China. Kwiminyaka edlulileyo kuye kwacaca nangaphambi koko ukuba kuninzi okunokuzuzwa macala kubudlelwane bethu. Sikwathanda ukuqinisela ukuzibophelela kwethu kubudlelwane obusondeleyo esiye sabenza ne-Brazil kunye ne-India oko sikwenza nge-IBSA; kunye kwakhona nobudlelwane ilizwe lethu elibenze ne-Russia, kunye namazwe ase- Asia, kuMbindi Mpuma, ngokunjalo nase-Latin nakumNtla Melika.
Kumathuba amaninzi siye savakalisa ukukhathazeka kwethu ngenxa yokuzinga kwembambano kuMbindi Mpuma jikelele ingakumbi kwaSirayeli nasePalestina. Ukuba nzulu kokuphoxeka kwethu ekunyukeni kwembambano kunye nelahleko enkulu yobomi, ingakumbi abantu abangekho mkhosini kuqukwa abantwana, abasetyhini nabantu abadala ngokwenene akunakuchazwa. Ayikho nje into enokuthethelelwa kwizenzo ezinjalo zokonakalisa nezobundlobongela. Kwaye siyathemba ukuba ngoku, iinzame ezivuselelweyo zoluntu lwamazwe ngamazwe zokuza nesisombululo esiya kuhlala ixesha elide ziya kuba neziqhamo kwesi sihlandlo, ukuze amaSirayeli namaPalestina abe noxolo nokhuseleko njengabamelwano ekwinkululeko yemimandla yabo. Sithi halala ngokungaphaya kurhulumente kunye nabantu base-Cuba ngesi sikhumbuzo sama-50 sokufumana inkululeko yabo, ngayo, babe nenkululeko yokukhetha indlela yabo yophuhliso. Siye sanako kunyaka ophelileyo ukugqibezela uthetha-thethwano neManyano yaseYurophu ngesicwangciso sobambiswano lwethu; siyathemba ke ukuba umoya owenza oko kudibana uyakuhlala ukhona xa sigqibezela uthetha-thethwano olumacala kwiziVumelwano zokuBambisana kwezoQoqosho kunye namazwe akummandla wethu. Sijonge phambili ekuloluleni ngokungaphaya olu bambiswano xa siza kube sisingethe iNgqungquthela ye-EU eMzantsi Afrika ngasekupheleni kwalo nyaka. Sikunye namanye amazwe asemaZantsi siyakuqhuba silandela ukwakhiwa ngokutsha kweZizwe eziManyeneyo, iNgxowa-mali yezeMali yamaZwe ngamaZwe, kunye namanye amaziko amaninzi ukuze abonise amazwe ngamazwe atshintshileyo natshintsha ngokwenene kwaye asebenza ngendlela enedemokhrasi, enobulungisa nengafihliyo. Sikwazibophelela nasekuhlangabezaneni neenjongo zezivumelwano zamazwe ngamazwe, kuqukwa ne-Kyoto Protocol kunye nabo balandelayo kuyo oko kusenzelwa izizukulwana zexa elizayo phakathi kwabantu bethu kunye nabantu behlabathi.
Nkosikazi Somlomo noSihlalo oBekekileyo;
Iinzame zethu yimithetho-siseko emibini esisiseko eyile: imfuno kuthi yokuphumeza igunya elanikwe lo rhulumentehe ngo-2004; kunye nokubaluleka kokuqinisekisa ukuba urhulumente oza kungena emva konyulo ufumana umgangatho osele ulungele ukuphumeza ezi nkqubo ngaphandle kolibaziseko olungafanelekanga. Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo de ibe lunyulo lwesizwe nolwamaphondo, siza kuzama ukugqibezela elo gunya laziwa kakhulu. Njengenxenye yeeprojekithi ezipheleleyo eziqulethwe kuManyathelo eNkqubo, siyakuthathela ingqalelo kakhulu eku:
daleni amandla afunekayo ofezekiso lwenkonzo oluphuculiweyo kunye nokudityaniswa okungcono kurhulumente kunye nakumacandelo akhe nesicwangciso soyilo sesizwe; ukuqhuba nephulo leMfazwe ebuHlwempini kunye nokugqibezela uyilo lweSicwangciso esiBanzi esiChasene nobuHlwempu ngokuhlangana nabantu okuqhubayo ke ngoku; phumeza inkqubo ebanzi esiyiqalileyo yokunciphisa izehlo zesifo sotyatyazo kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe; ukuqhuba uphando kunye nokudibana ngeNdlela yoKhuselo oluBanzi kwezeNtlalo, kuqukwa nomba we-Inshurensi yeMpilo yeSizwe; ukwandisa iphulo lokulondoloza amandla ombane ukuze kukwazeke ukulawuleka kobunzima obukhoyo ngoku nathi sitshintshe ukuziphatha kwethu, ngeli lixa kwangaxesha nye sikhawulezisa iiprojekithi zokwakha amandla amatsha kwaye sisebenzise ezinye iindlela zemithombo tyombanec siqonda ukuba ukongeza kwiziphumo zokutshintsha kwemozulu, imithombo efana namafutha entsalela kunye namanzi iyehla ngexa kwangaxesha nye imfuno yona iya isonyuka; ukudibanisa kumsebenzi wamaCandelo amanye abandakanyekayo izinto ezifunyanisiweyo kuphando kokubandakanyekayo kuQoqosho lweSibini njengeenkqubo zemisebenzi yoluntu inkxaso kumashishini amancinane kunye namaphulo okuphuhlisa amaphandle; ukwandisa iinzame zokulungisa ngokutsha inkqubo yobulungisa kulwaphulo-mthetho, kuqukwa namandla ophando ngokunzulu ukuze kusonjululwe ingxaki kulwaphulo-mthetho, ukonyuka ngokukhawuleza kwenani labaphandi, ukusetyenziswa ngokugqwesileyo kolwazi kunye nobuchwepheshe bonxibelelwano kunye nolawulo olungcono lweenkundla; kunye nokuququzelela iinkqubo ezijolise ekolulweni kwezinto eziphathelene nolingano ngokwesini ezifana nokumelwa okungama-50/50 kumaqumrhu awenza izigqibo, uphuhliso lolutsha, amalumgelo abantu abakhubazekileyo kunye namalungelo abantwana kuqukwa nokugqibezela iindibano kuMgaqo-nkqubo weSizwe woluTsha, ukulungiselelwa kokuphunyezwa kweTshata yeSizwe yase-Afrika yakube ilungisiwe yiPalamente, kunye nokumisa i-Arhente yeSizwe yoPhuhliso loluTsha; ukungenisa iProtokoli ye-SADC kwiSini noPhuhliso ePalamente, ukolula inkxaso kumalungelo abantu abakhubazekileyo kunye nokwandisa inani loomasipala ukuba bamisele iiNdawo ezibalulekileyo zamaLungelo abaNtwana ziye ngaphaya kwama-60% akhoyo ngoku. Ezi kunye nezinye iinkqubo, kuqukwa kweenkonzo ezingundoqo ezachazwa kwiNtetho eyeNzela iSizwe ePalamente kweyoMdumba ophelileyo, zenza uqilima lwemizamo yethu yokuligqiba igunya elaziwayo zize zibeke isiseko sexa elizayo.
Siyakuzenza zibe namandla kakhulu iinzame zethu sikhuthazwa yinzondelelo, ithemba nokomelela kwabantu boMzantsi Afrika ekulandeleni oko kulungele thina xa sisonke. Oku, kungundoqo, kungumthombo wokuzithemba kwethu xa sisithi isizwe sikwimo entle. Idemokhrasi yethu isempilweni, ikhula kancinane ngokomeleleyo. Ngoko ke, ngamagama alowo wayesakuba nguMongameli Mandela, [thina] kufuneka singasaleli emva, kuba uhambo [lwethu] olude alukapheli.
Last Modified: Tue, 24 Feb 2009 15:56:34 SAST